सानो जातिहरु को कुकुर को लागि सुक्खा खाना
पशु चिकित्सकहरु अनुसार, साना कुकुर तिनीहरूले ठूलो कुकुर खाने समान खाना खान हुँदैन। खैर, यो अवधारणा परिभाषित गर्न आवश्यक छ "सानो।" यो कुकुर25 किलो तौल हुनुपर्छ भन्ने हो। उमेर रूपमा अर्को महत्वपूर्ण सूचकहरू र आफ्नो पाल्तु जनावर को ऊर्जा लागत। यो आधारमा यसलाई आहार आकर्षित र साना जातिहरु लागि सही भोजन चयन गर्न आवश्यक छ।
सानो कुकुर को शरीर विज्ञान
को लघु जातिहरु को मुख्य प्रतिनिधि टेरियर्स हो, ची-भयो-भयो, Spitz, योर्कशायर टेरियर्स। यी कुकुर ऊर्जा लागत र त्वरित चयापचय अत्यन्तै चुस्त छन्, र यसैले तिनीहरूले बढेको छ। उदाहरणका लागि, वजन ऊर्जा लागत हरेक किलोग्राम लागि Yorkshire Terrier सेन्ट बर्नार्ड र गोठाला ती भन्दा उच्च हो। puppyhood देखि सानो कुकुर puppies को ठूलो जातिहरु भन्दा छिटो बढ्न। स्वाभाविक, तिनीहरूले यौन परिपक्व हुनेछ। त्यसैले तपाईं तुरुन्तै assimilate खाना, ऊर्जा र कुकुर खाना दिने आवश्यक छ। गर्नुपर्छ प्याकेजिङ्ग मा लेखिएको छ के, साना जातिहरु लागि खाना खरीद ध्यान। तपाईं एक सानो पिल्ला आकर्षित भने, यो होइन सानो जातिहरु लागि खाना छ। यो फिड ठूलो कुकुर को लागि एक पिल्ला सानो व्यक्तिहरूलाई लागि उपयुक्त छैन हुन, र यसैले गर्न सक्नुहुन्छ।
एक घर भइरहेको कुकुर को सानो जातिहरु को, मालिक कुकुर अझै पनि ब्वाँसा परिवारको प्रतिनिधिको हुन् भनेर बिर्सनु, र यसैले तिनीहरूले प्रोटिन खाद्य पदार्थ सिफारिस गरिएको। सानो जात लागि आहार मा पशु चिकित्सकहरु को सिफारिसमा सुक्खा खाना उपलब्ध हुनुपर्छ मासु, दुबला मटन मासु उत्पादन, दूध र उबला अन्डा संग कुकुर। बिल्कुल contraindicated: पोर्क, बोसो trimmings, कच्चा माछा। कुकुर धूम्रपान मासु र sausages, साथै कच्चा अन्डा र अनाज सबै प्रकार दिन छैन। यस्तो उत्पादन, आलु र टमाटर र oxalate, खाना समावेश जस्तै genitourinary सिस्टम को सञ्चालन अक्षम। चकलेट र बेकरी उत्पादन बारे, विशेष खमीर आटा कुनै प्रश्न हुन सक्छ। बिरालो खाना पनि सानो जातिहरु को कुकुर को लागि contraindicated छ। बिरालो खाद्य पदार्थ बोसो र प्रोटिन धेरै समावेश गर्दछ।
आफ्नो सानो पाल्तु जनावर गर्न सुक्खा खाना दिन नडराऊ। यो खाना सन्तुलित छ र सबै आवश्यक कुकुर भिटामिन र खनिज समावेश गर्दछ। यसरी, साना जातिहरु को कुकुर को लागि प्रिमियम पाल्तु जनावर भोजन बोसो, प्रोटीन र कार्बोहाइड्रेट को स्पष्ट ब्यालेन्स अवलोकन। यस्तो खाना खरीद कुकुर खाना खन्याउन कति सोच्न आवश्यक छैन। प्याकेज मा उमेर, तौल र नस्ल लागि मान्यता संकेत गर्नुभयो। अक्सर सुक्खा खाना निर्माताहरु संग प्याकेज सजिलो वितरण लागि नाप्ने कन्टेनर राखे। विभिन्न निर्माताहरु देखि खाना खरीद गरेर, तपाईं आदर्श आफ्नो कुकुर राख्नु छ के ध्यान पढ्न आवश्यक छ। विभिन्न निर्माताहरु भोजन विभिन्न ताप मूल्य हुन सक्छ।
रुचाउने तयार खाना सर्तहरू
नियमहरूमा धेरै सरल छन्। यो सानो जातिहरु, आफ्नो आवश्यकता अनुकूल को कुकुर को लागि विशेष खाना को विकल्प हो। ड्राई पाल्तु जनावर खाना उमेर समूह द्वारा विभाजित छन्। तिनीहरूलाई भ्रममा छैन, र किन्न खाना कुकुर पर्छ जो श्रेणी छ आवश्यक छ। यो puppies, जूनियर, वयस्क र पुरानो कुकुर लागि खाना छ। तपाईं आफ्नो कुकुर overfeed हुँदैन, तपाईं प्याकेज तोकिएको नियम लीन गर्न आवश्यक छ।
भोजन पछि, यो उनको गतिविधि प्रकुपित वा पैदल लागि राख्न, कुकुर संग खेल व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। खानाको पछि कुकुर खाना assimilate गर्न बाँकी हुनुपर्छ। यसलाई नियमित, जनावर वजन गर्न कुकुर overfed छ कि छैन भनेर बुझ्न क्रममा उचित छ। कुनै पनि मामला मा, तपाईं आहार मा आवश्यक सिफारिसहरू दिन गर्ने पशुचिकित्सा, कुराकानी गर्न आवश्यक छ।
ड्राई forages को प्रकार
ड्राई फिड, को उत्पादन मा लगे कम्पनीहरु सामान्यतया आफ्नो संरचना, मूल्य र गुणस्तर निर्भर मूल्यांकन गठन सुक्खा खाना। अर्थव्यवस्था फिड भिटामिन समावेश र कम कच्चा माल नमूना समावेश छैन। खुवाउन प्रिमियम पनि कच्चा माल उच्च छैन गुणस्तर, र थप बोसो र प्रोटीन मा अर्थव्यवस्था वर्ग अघि को फाइदा छ भन्छिन्। सबैभन्दा मूल्यवान सुक्खा खाना प्राकृतिक मासु, अन्डा र खाद्य additives समावेश जो सुपर प्रिमियर-वर्ग, गर्न attributable मानिन्छ।
ड्राई पाल्तु जनावर खाना उमेर मा स्नातक मा, त्यो छ, पिल्ला देखि वयस्क पशु र पशु आहार गर्न विभाजित छन्। उदाहरणका लागि, सानो जातिहरु को कुकुर को लागि प्रिमियम खाना गर्न (संयुक्त राज्य अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स मा बना) "हिल्स" समावेश गर्नुहोस्। हिल विज्ञान योजना - लागि कुकुर को दैनिक रुचाउने सुक्खा खाना को शृंखला। यो खाना बनाएर, nutritionists विशेषज्ञहरु नवीनतम वैज्ञानिक उपलब्धिहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यो एक कुकुर को उमेर अनुरूप, उत्पादनहरु को एक लाइन प्रदान गर्दछ। कि भोजन, metabolized छ मापदण्डको एक - मलको मात्रा कम, satiety वृद्धि।
ब्रिटेन प्रिमियम ( "ब्रिटेन प्रिमियम") चेक गणतन्त्र मा उत्पादित छ। विभिन्न उमेरका कुकुर को खुवाउने लागि सुक्खा खाना उत्पादन। फ्रान्स प्रो योजना सुक्खा खाना उत्पादन ( "प्रो योजना") पनि प्रिमियम वर्ग र कुकुर लागि सन्तुलित आहार मा लागू हुन्छ।
सुक्खा खाना आहार
हिल विज्ञान योजना विशेष हेरविचार - केही स्वास्थ्य समस्याहरू पाल्तु जनावर खाना। सानो जातिहरु मात्र सकारात्मक समीक्षा होस्टहरूको कुकुर लागि यो फिड। ठीक छ, कुकुर कुनै स्वास्थ्य समस्या छ, तर तिनीहरूले उत्पन्न भने, जो कारण को लागि, माथि-उल्लेख श्रृंखला कुकुर स्वास्थ्य दुरुस्त भने, कुकुर को मालिक विभाजित छन्। यो श्रृंखला मा, त्यहाँ छाला समस्या र संवेदनशील stomachs, मौखिक गुहा र दाँत, वजन संग सन्तुलित आहार को रोकथाम लागि dietetic खाना कुकुर लागि खाना छ। ड्राई आहार फिड सुपर प्रिमियम वर्ग को लागि पनि एक "प्रो योजना" छ।
धेरै पाल्तु जनावर मालिक एलर्जी झुकाउ हो, पशु सिफारिसहरू को संवेदनशील पाचन लागि रुचाउने चारा को2महिना पछि पाल्तु जनावर ठीक याद गर्नुहोस्। पशु चिकित्सकहरु बिहान रुचाउने सिफारिस र Frostbitten podvarennoe बीफ दिन र रात मार्फत 7-8 घण्टा र सुक्खा खाना दिन्छ।
तिब्बती Mastiff - संसारमा सबैभन्दा महंगा कुकुर
के सुत्केरी बिरालो खुवाउन?
जीवाणुरोधी दबाइ "Mastiet गुण": जनावर लागि प्रयोगको लागि निर्देशन
ताजा चरण - बिरालो ट्रे लागि फिलर: उत्पादन विवरण
किन बाल एक बिरालो बाहिर पतन?
जूता Casadei: लगाउन के?
चींटियहरुलाई बगैंचामा बसे भने
लेम्बोर्गिनी Aventador: विशेष र अद्वितीय
मास्टर वर्ग: आफ्नो हातले एक टेप देखि गुलाब
समुद्रमा फोटो शूटको अनूठा तस्बिरहरू र चित्रित विचारहरू
विंडोज चालक अद्यावधिक गर्दै
Begonia मेसन एक सभ्य कम्पनी को लागि रिटर्न
लेखक कैट मार्टिन: पुस्तक
माली ध्यान दिनुहोस्: लसुन रोपेर कसरी वसन्त मा